Wiil ay dhashay Saado Cali oo dacwad ka gudbiyay Dahabshiil. - Wargeyska Faafiye
Wiil ay dhashay Saado Cali oo dacwad ka gudbiyay Dahabshiil.
Wiil ay dhashay fannaanaddii waynayd ee Saado Cali Warsame ayaa maxkamad la fuulaya shirkadda xawaaladda Dahabshiil oo uu ku eedeeyay inay lacag ku bixisay dilkii hooyadiis loo gaystay, bogga Wargeyska The Star Tribune ee ka soo baxa gobolka Minnesota ayaa lagu soo daabacay.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDagaal ka dhacay Hiiraan.Jabuuti oo xaqiijisay in shan askari looga dilay weerarkii Buulo-burte.Qarax lala eegtay Shaqaalaha safaarada Turkey .DEG DEG: Maxkamada Sare Ee Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukun dil ah ku riday Xasan Xanafi Xaaji.UNHCR says voluntary repatriation of Somali refugees to proceed.